Camcoin စျေး - အွန်လိုင်း CAM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Camcoin (CAM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Camcoin (CAM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Camcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
CAM – Camcoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Camcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Camcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CamcoinCAM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0178CamcoinCAM သို့ ယူရိုEUR€0.015CamcoinCAM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0136CamcoinCAM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0162CamcoinCAM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.158CamcoinCAM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.112CamcoinCAM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.392CamcoinCAM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0661CamcoinCAM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0235CamcoinCAM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0248CamcoinCAM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.392CamcoinCAM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.138CamcoinCAM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0958CamcoinCAM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.33CamcoinCAM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3CamcoinCAM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0244CamcoinCAM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0271CamcoinCAM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.553CamcoinCAM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.124CamcoinCAM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.89CamcoinCAM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩21.09CamcoinCAM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦6.86CamcoinCAM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.3CamcoinCAM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.486
CamcoinCAM သို့ BitcoinBTC0.000002 CamcoinCAM သို့ EthereumETH0.00005 CamcoinCAM သို့ LitecoinLTC0.000327 CamcoinCAM သို့ DigitalCashDASH0.000196 CamcoinCAM သို့ MoneroXMR0.0002 CamcoinCAM သို့ NxtNXT1.39 CamcoinCAM သို့ Ethereum ClassicETC0.00262 CamcoinCAM သို့ DogecoinDOGE5.13 CamcoinCAM သို့ ZCashZEC0.000216 CamcoinCAM သို့ BitsharesBTS0.548 CamcoinCAM သို့ DigiByteDGB0.569 CamcoinCAM သို့ RippleXRP0.0631 CamcoinCAM သို့ BitcoinDarkBTCD0.000613 CamcoinCAM သို့ PeerCoinPPC0.059 CamcoinCAM သို့ CraigsCoinCRAIG8.1 CamcoinCAM သို့ BitstakeXBS0.758 CamcoinCAM သို့ PayCoinXPY0.31 CamcoinCAM သို့ ProsperCoinPRC2.23 CamcoinCAM သို့ YbCoinYBC0.00001 CamcoinCAM သို့ DarkKushDANK5.7 CamcoinCAM သို့ GiveCoinGIVE38.5 CamcoinCAM သို့ KoboCoinKOBO4.05 CamcoinCAM သို့ DarkTokenDT0.0164 CamcoinCAM သို့ CETUS CoinCETI51.34
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 15:00:03 +0000.